Thiszọ a tụbara bụbu otu mgbe. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-asọpụrụ Harriet Tubman - TELES RELAY
Zọ a tụbara bụbu otu mgbe. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-asọpụrụ Harriet Tubman
Ndị ọrụ kompeni Miami-Dade na-akwadoghị atụmatụ Mọnde ka ha wee nyegharịa akụkụ nke Dixie Highway, nke na-aga puku kilomita 5786 gafee steeti iri site na Michigan ruo Miami, dịka Mgbakwunye CNN WPLG.
Kọmịshọna Dennis Moss, Miami-Dade District 9 Commissioner Dennis Moss kwuru, "Oge kwesịrị ekwesị mgbe niile ime ihe ziri ezi."
Dabere na echiche gị, okwu Dixie na-enweta ihe dị iche maka ndị dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, ọ na - ejikọ ya na steeti ndịda ndịda na steeti ndị ọzọ. A na-ewere Dixie dịka ala ndịda nke akara Mason-Dixon, ebe ịgba ohu bụ ihe iwu kwadoro.
Ikpe na-ezighị ezi zoro ezo n'anya
Moss malitere ịmụgharị aha ahụ ka ọ gụchara akwụkwọ ozi sitere n'aka nwoke akpọrọ Modesto Abety, onye bụbu onye isi oche nke ntụkwasị obi ụmụaka na Miami-Dade County.
Nwa nwa Abety jụrụ ya ihe kpatara "Dixie" ka ji dị n’okporo ụzọ enyere ya mkpakọrịta ya na ohu, Moss gwara CNN.
"Agakwuuru m iwu ahụ ma ana m eme ya n'ihi na Dixie nwere njikọ na ndị steeti Confederate," o kwuru.
Moss kwuru na ikpe na-ezighi ezi ahụ anọwo na-ezo na nzuzo mgbe niile, mana ọ na-enwe obi ụtọ ma nwee obi ụtọ na ndị ọrụ ibe ya ghọtara mkpa aha a gbanwere na ihe Dixie nọchiri anya ya n'oge gara aga.
Mkpebi ịkpọgharị Dixie Highway mgbe Tubman sitere na aro sitere na nwa nwa Abety.
Moss kwuru, "O megidere ịgba ohu." "Echere m na aro a bụ ezigbo ndụmọdụ. "
Ọ dị mkpa maka Moss setịpụrụ ụkpụrụ site na ọbụghị iwepu aha Dixie na okporo ụzọ ndị Miami-Dade na-achịkwa, mana site na ịrịọ Steeti Florida ka ọ wepụ ya n'okporo ụzọ ebe enwere ikike ya.
Botae dị n'okporo ụzọ ịgbanwe
Agbanyeghị na ndị ọrụ komputa nke Miami-Dade kwadoro ka agbanwee aha ahụ, ọ dị steeti ọ bụla ime ihe n'akụkụ ndị ọzọ nke okporo ụzọ ahụ. Ndị omebe iwu steeti ga-agbaso usoro nnabata ha maka ngalaba steeti ọ bụla nwere.
Nkwado abụghị otu na nkwekọ, mana ọ tụrụ n'anya Moss, o kwuru na enwere mmegide pere mpe.
Amabeghị ego ọ ga-ewe maka ịmegharị aha ahụ ga-efu obodo ahụ, mana Moss kwuru na ya na ndị ọrụ ibe ya dị njikere ime ihe ọ bụla ọ chọrọ iji hụ ma agbanwee ya otu oge.
"Ọ bụrụ na ọ bụ okporo ụzọ Adolf Hitler, ma ọ bụ na ọ bụ n'obodo anyị, okporo ụzọ Fidel Castro, [ego ahụ] agaghị abụ ihe nchebara echiche ma a gbanwee mmegharị ahụ," a Moss kwuru. "Ya mere, ka anyị ghara ikwe ka nke a bụrụ ihe mgbochi ma mee ihe ziri ezi. "
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.cnn.com/2020/02/21/us/harriet-tubman-dixie-highway-trnd/index.html
Anya n’azụ ihe ndekọ California banyere ọrịa kansa kansa
Onweghi ikikere mmanya ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ aha ya, mgbazinye ya na nkụ a ga-agbapụ - The Boston Globe